Xaq u yeelashada Caafimaadka CHPW Apple - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Raadi Qorshe > Qorshaha Caafimaadka Apple > U-qalmitaanka Caafimaadka Apple ee CHPW
U-qalmitaanka Caafimaadka Apple ee CHPW
Soo ogow haddii aad u-qalanto caymiska Apple Health (Medicaid).
U-qalmitaanka Apple Health iyada oo ku saleysan xaaladdaada
U-qalmitaanka Apple Health (Medicaid) waxay kuxirantahay daqligaaga iyo xaaladaada nolosha. Akhriso shuruudaha hoose si aad u ogaato inaad xaq u leedahay iyo in kale.
Ceymiska Apple Health waa laga reebay tabinta iyadoo ay dacwadda dadweynaha ku jirto mana saamaynayso sharciga socdaalka.
* Heerarka dakhliga ee ku taxan tusaalooyinkaan waa la beddeli karaa sanad walba Abriil kasta.
Apple Health ee shaqsiyaadka qaangaarka ah (da'da 19-64)
Da'daadu tahay 19 illaa 64.
Hayso dakhli sanadle ah oo qoyskaaga ah kana hooseeya heerka Medicaid (kafiiri shaxda dakhliga hoose).
Xaq uma lihid Medicare.
Apple Health ee dadka waaweyn (da'da 19 illaa 64 sano)
Dakhliga bishii $ 1,563 $ 2,106 $ 2,649 $ 3,192 $ 3,735 $ 4,277 $ 4,820
Apple Health waalidiinta / daryeelayaasha
Waxaad xaq u yeelan kartaa Apple Health ee caymiska Waalidka / Daryeelaha haddii aad:
Gurigaaga ku heystaan ​​carruur ku tiirsan oo ka yar 18 sano.
Apple Health ee Waalidiinta / Daryeelayaasha (dadka waaweyn ee leh carruur ku tiirsan oo ka yar 18 sano)
Dakhliga bishii $ 511 $ 658 $ 820 $ 972 $ 1,127 $ 1,284 $ 1,471
Apple Health shaqsiyaadka uurka leh
Waxaad xaq u yeelan kartaa caymiska shaqsiyaadka uurka leh Apple Health haddii aad:
Ku noolow Gobolka Washington
Dakhli ku leh ama ka hooseeya 193% ee Heerka Saboolnimada Federaalka (FPL) (eeg jaantuska dakhliga ee hoose).*
Caafimaadka Apple ee Shaqsiyaadka uurka leh
Dakhliga bishii N / A $ 3,022 $ 3,800 $ 4,579 $ 5,358 $ 6,137 $ 6,916
Apple Health ee dadka aan heysan dhalashada
Shakhsiyaadka aan buuxin shuruudaha barnaamijka ee loogu talagalay Apple Health kaliya sababo la xiriira socdaalka waxay u qalmi karaan Barnaamijka Caafimaadka Degdega ah ee Shisheeyaha (AEM) haddii ay leeyihiin xaalad caafimaad oo u qalma (waa inay lahaadaan ama u baahan yihiin ugu yaraan mid ka mid ah kuwan soo socda):
Xaalad caafimaad oo deg deg ah oo uqalma sida daryeelka qolka gargaarka degdega ah, qaabilaada bukaan jiifka, ama qaliinka isbitaalka bukaan socodka
Qorshaha daaweynta kansarka
Daawada diidmada diidmada ee xubin xubin
Adeegyada Daryeelka muddada-dheer (LTC) (oggolaansho hore ayaa loo baahan yahay)
COVID-19 qiimeynta iyo baaritaanka
Ma hubo in xaaladaada caafimaad ay u qalanto iyo in kale? Ka wac Xarunta Adeegga Macaamiisha Hay'adda Daryeelka Caafimaadka (HCA) 1-800-562-3022 (TRS: 711).
Apple Health dadka da'da ah, indhoolayaasha, ama naafada ah
Haddii aad tahay 65 jir iyo ka weyn, indhoole ah, ama naafo ah oo buuxiya shuruudaha dakhliga iyo ilaha, * Apple Health (Medicaid) ayaa laga yaabaa inay bixiso caymis daryeel caafimaad iyo kaa caawin doonta bixinta khidmadaha Medicare iyo kharashaadka caafimaadka.
Apple Health ee Waayeelka, Indhoolayaasha, ama Naafada ah
Tirada Reerka Qof keli ah 2-qof
Dakhliga bishii $ 841 $ 1,261
Apple Health ee dadka waaweyn ee jira 65 +
Qaar ka mid ah dadka qaata Medicare sidoo kale waxay xaq u leeyihiin caymiska Apple Health (Medicaid).
Caymiskan waxaa ku jiri kara caymis bilaash ah ama qiimo jaban, ka caawinta bixinta khidmadaha Medicare, ama adeegyada muddada dheer iyo taakulaynta.
U-qalmitaanka caymiska Apple Health waxaa go'aaminaya dakhliga iyo ilaha qoyskaaga (marka laga reebo Apple Health ee Shaqaalaha Naafada ah). Ka wac Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka 1-877-501-2233.
Apple Health ee carruurta (illaa da'da 19)
Ilmahaagu wuxuu xaq u yeelan karaa Apple Health ee Carruurta, qorshe caymis bilaash ah ama qiimo jaban, haddii dakhligaagu ka hooseeyo ama ka hooseeyo heerka Medicaid (ka eeg jaantusyada dakhliga hoose).
Qorshahan, daryeelka caafimaad ee ilmahaaga wuxuu noqon karaa mid bilaash ah ama qiimo jaban, oo leh qiimo jaban.
Apple Health ee carruurta (Caymis Bilaash ah ama Qiimo Jaban)
Dakhliga bishii $ 2,435 $ 3,281 $ 4,127 $ 4,972 $ 5,818 $ 6,664 $ 7,509
Miyaanad hubin ka mid ah qaybahan adiga ku khuseeya? Naga soo wac 1-866-907-1904 (TTY Dial: 711), Isniinta ilaa Jimcaha 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo, waanan ku faraxsanahay inaan ku caawinno.
Waxay kuxirantahay xaaladaada nolosha, waxaad xaq u yeelan kartaa nooc caafimaad oo ka duwan. CHPW waxay kaloo bixisaa qorshayaashan caafimaad:
Haddii heerkaaga dakhliga uu ka sarreeyo heerarka Apple Health waxaad xaq u yeelan kartaa Cascade Care. Qorshayaasha daryeelka Cascade waa qorshooyin caafimaad oo la awoodi karo oo lagu bixiyo wahealthplanfinder.org. Daryeelka Cascade waxaa ku jira qorshooyin sida CHNW Cascade Select.
Eeg faahfaahinta u-qalmitaanka ➜
Dadka jira 65 ama ka weyn, ama leh noocyo naafonimo ah, ayaa u qalmi kara qorshaha Faa'iidada Medicare ee CHPW. Dadka qaarkood waxay u qalmi karaan labada Medicare iyo Apple Health (Medicaid) iyadoon loo eegin dakhliga soo gala.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: May 11, 2022